प्रेमीको विबाह मण्डपमै गएर प्रेमीकाले का’टिदिईन् बेहुलीको कपाल, अरु के के गरिन्? हेर्नुस् – PathivaraOnline
Home > समाज > प्रेमीको विबाह मण्डपमै गएर प्रेमीकाले का’टिदिईन् बेहुलीको कपाल, अरु के के गरिन्? हेर्नुस्
प्रेमीको विबाह मण्डपमै गएर प्रेमीकाले का’टिदिईन् बेहुलीको कपाल, अरु के के गरिन्? हेर्नुस्
admin December 4, 2020 समाज	0
एजेन्सी । भारतको बिहारमा रहेको नालंदामा एउटा यस्तो घटना घटेको छ जुन थाहा पाएपछि उडेको छ सबैको होस् ।
बिहारको नालंदामा एक प्रेमीकाले आफ्नो प्रेमीको विबाह मंडपमै गएर प्रेमीको हुनेवाला दुलहीको कपाल नै काटिदिएकी छन् । उनले कपाल त काटिन् काटिन् साथै प्रेमीको हुनेवाला दुलहीको आँखामा फेविकल लगाई दिएर आँखा नै टाँसिदिएकी छन् । यति मात्र नभई ती प्रेमीकाले हुनेवाला बेहुलीको राम धुलाई समेत गरेकी छन् ।
तर प्रेमी कहलीएका ती नव दुलाहाले आरोपी केटीलाई धोका दिएर अर्कै केटीसंग विबाह गर्न लागेको खबर थाहा पाएर प्रेमीकाले त्यस्तो कदम उठाएको प्रहरीले बताएको छ ।
आफ्नो प्रेमीको विबाहको कुरा सुनेर रिसले चुर परेकी प्रेमीकाले बदलाको भावना लिएर प्रेमीको घरम पुगेर त्यो घटना घटाएको प्रहरीले बताएको छ ।
समयमै घटना स्थल पुगेका प्रहरीले ती आ’रो’पी प्रेमीकालाई गि’र’फ्ता’र गरीसकेका छन् । उता नव दुलहीको उपचारकोलागी उनलाई अस्पतालमा भर्ना गराईएको छ । आँखामा फेविकल टाँसिदिएको हुनाले नव दुलहीको अवस्था ग’म्भि’र भएको प्रहरीले बताएको छ ।